साउन ११, २०७४ जनकपुरधाम, ११ साउन — एक महिना अघि २५ बर्षिय आशिष साह दाँतको उपचार गराउन जनकपुर अञ्जल अस्पताल पुगे । ओपिडीका डाक्टर अजय साहले केही औषधी लेखिदिए ।
पछिल्ला पाँचौ र छैठौं दाँतलाई चाहिँ आरसिटी गर्नुपर्ने उनले बताए । तर पछिल्ला दाँतको आरसीटी अञ्चल अस्पतालमा नहुने भएकोले बाँकी उपचार निजी क्लिनिकमै गर्न सुझाए ।
विरामी साहले १२ हजार खर्च गरेर नजिकैको निजी क्लिनिकमा उपचार गराए । ‘सरकार अस्पताल भए दुई तीन हजारमै उपचार हुन्थ्यो,’ साह भन्छन्, ‘तर अञ्चल अस्पताल आफैं दाँत फुक्लिएको अवस्थामा छ ।’
साह मात्रै होइन अञ्चल अस्पतालमा दाँतको समस्या लिएर जाने जो कोहीले पनि यस्तै समस्या ब्होरेका छन् । अञ्चल अस्पतालका डाक्टरहरुले सुरुमा जति ठूलो समस्या भएपनि केही औषधी लेख्छन् । अर्को पटक पनि विरामी आएमा एक्सरे गर्छन् । दाँतको आरसीटी गर्नुपर्ने देखिएमा चाहिँ बाहिर जान सुझाउँछन् ।
एउटा दाँत उखेल्नु परेमा एक हप्ता भन्दा बढी समय अस्पतालले लगाइदिन्छन् । अस्पतालको ढिलासुस्तीका कारणले पनि विरामीहरू बाहिर जान बाध्य छन् ।
अञ्चल अस्पतालका डाक्टरहरुले मौका मिलेमा विरामीलाई ‘यहाँ उपचार हुँदैन मेरो क्लिनीकमा आउनू’ सम्म भन्ने विरामीहरु बताउँछन् । अञ्चल अस्पतालमा उपचार नगर्ने डाक्टरले निजी क्लिनका चाहिँ विरामीको उपचार गर्छन् ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालको डेन्टल डिपार्टमेन्टमा पाँच जना चिकित्सकहरु कार्यरत छन् । डेन्टल सर्जनको रुपमा १८/२० बर्ष देखि कार्यरत सबैभन्दा पुराना चिकित्सक डा. शशिकुमार ठाकुर, अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट ज्यालादारीमा डेन्टल सर्जन डा.कुन्दन मिश्रा, भोलन्टियरको रुपमा डेन्टल सर्जन डा.अजय कुमार साह कार्यरत छन् ।
डा.निमु यादव अनधिकृत रुपमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ बर्ष अघि करारमा नियूक्त भएका डा. यादवको करार गत पुष २०७३ मा सकियो ।
तत्कालिन मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.गौराङ्ग मिश्रको कार्यकालमा उनको करार अवधि मन्त्रालयले थप गरेन । भोलन्टियरको रुपमा पनि उनलाई राखिएन ।
तर, अहिले अस्पतालका बहालबाला मेसु डा.रामपरिक्षण यादवले उनलाई विना कुनै नियूक्तिको कागजात अनधिकृत रुपमा खटाएका छन् । विभाग प्रमुख डा. शशि ठाकुर भन्छन्, ‘मेसु डाक्टर यादवले डाक्टर निमु यादवलाई काम गराउ भनेर मौखिक आदेश दिएकोले काम गराएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागु रहेका कारण नियूक्ति पत्र दिइएको छैन ।’
नवौं तहमा कार्यरत डा. निशा महतोलाई मन्त्रालयले करारमा नियूक्त गरेको थियो । यस अघिको मेसु मिश्रले बरिष्ठताको आधारमा उनलाई विभाग प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी प्रदान गरेका थियो । तर, ५ अषाढ देखि मेसु यादवले उनलाई उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी कनिष्ठ डा.शशि ठाकुरलाई विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरे ।
अञ्चल अस्पतालमा दन्त परीक्षण, दाँत निकाल्ने, दाँत अस्थायी र स्थायी रुपमा भर्ने, दाँत सफा गर्ने, अगाडीको दाँतमा आरसिटी (दाँत जरैदेखि भर्ने) काम भइरहेको छ ।
तर, पछाडीको दाँतमा आरसिटी सेवा उपलब्ध गराइएको छैन । अस्पतालमा अधिकांश विरामीहरु पछाडीको दाँतमा आरसिटी गराउन आउँछन् । जबकी उक्त सेवा दिनका लागि त्यहाँ कार्यरत डा.निशा महतो विशेषज्ञ नै हुन ।
तर त्यो सेवा सुरु भएको छैन । जबकी उक्त काम त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरुले बाहिर आफ्नो निजी क्लिनिक र अस्पतालमा गरिरहेका छन् ।
आरसिटी सम्मको काम विडिएस गरेका चिकित्सकले गर्नुपर्ने काम हो । तर, गर्नुपर्ने काम नगरी दाँतको एक्सरे गर्ने काम चिकित्सकले अञ्चल अस्पतालमा गरिरहेका छन् ।
डा.कुन्दन मिश्राले त्यो काम गरिरहेका छन् । जबकी उक्त काम एक्सरे टेक्निसियनले गर्नुपर्ने हो । मेजर सर्जरीका लागि नवौ तहका चिकित्सक त्यहाँ छैन ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पान पराग तथा सुर्ती जन्य पदार्थहरु निषेध गरिएको छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा ५ सय ५१ रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकिएको छ । तर, डेन्टल विभागको विभाग प्रमुख डा.शशि ठाकुर आफै पान पराग र गुटखा खाँदै विरामीहरुलाई उपचार गरिरहेको पाइन्छ ।
दाँतको उपचार गर्ने चिकित्सकले नै सुर्ती जन्य पदार्थ सेवन गरी उपचार गर्दा विरामीलाई अप्ठयारो समेत महसुस हुने गरेको भएपनि डा.ठाकुरलाई कुनै असर परेको छैन ।
उपकरणको रुपमा त्यहाँ एउटा मात्र डेन्टल चेयर छ । अर्को डेन्टल चेयर भाँचिएको छ । त्यसलाई मर्मत गराइएको छैन । जबकी एउटा निजी क्लिनिकमा समेत डाक्टरहरुले दुईवटा डेन्टल चेयर राख्ने गरेका हुन्छन् ।
साउन ११, २०७४ मा प्रकाशित